Nhau - Exhibition
Winby kenduru kambani ikambani ine hunyanzvi kugadzira makenduru ane hwema, zvirongo zvemakenduru, kenduru yembiru uye kenduru yeunyanzvi. Isu takatora chikamu muCanton Fair kwemakore mazhinji, uye takwezva vatengi vakawanda kubva kunyika zhinji pasi rese. Parizvino, isu tichiri kuchengetedza kwenguva refu kubatana hukama nekuda kwemhando yepamusoro, yemakwikwi mutengo uye basa rakanakisa. Vatengi vazhinji vakatipa yakakwira ongororo yezvigadzirwa zvedu.
PaCanton Fair, kambani yedu yakwezva vazhinji vanoda kenduru kubva pasirese, uye vanofarira makenduru edu egirazi anonhuwirira. Isu tinopa makenduru mumhando dzakasiyana dzemukombe, kusanganisira shongwe yegirazi mukombe, Yankee maitiro, mraba mukombe, tini chirongo, yekuchengetedza chirongo. Uye zvakare akawanda makenduru. Ehezve, ivo vanofarirawo zvikuru edu masevhisi masevhisi, nekuti ivo vanogona kupurinda yavo yavanofarira zvinyorwa kana mifananidzo pamakenduru avo anodikanwa anonhuwirira.
Nekuda kwehunhu hwechigadzirwa uye nebasa revatengi, takahwina kufarirwa nevatengi vazhinji kuCanton Fair. Semuenzaniso, mumwe wevatengi vedu akatitumira email: Ini ndinoda kushandira pamwe newe. Sevhisi yako ndeimwe yeakanakisa andisati ndamboona. Nekuda kwebasa rako repamoyo, hapana chekushushikana nacho. Kutenda kuzhinji.
Imwezve inofarirwa, mumwe wevatengi vedu kubva kuUK akatitumira tsamba: Ini ndinonyatsoda kushandisa kambani yako sezvo ndiri kunyatsoziva kuti iwe ikozvino waita kutenderera kwemasampuli edu mahara. Nekuda kweizvozvo, isu tinofara kubhadhara kuitira kuti tive nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvedu zvinoitwa zvemhando yepamusoro uye zvakagadzirira kushambadzira nekukurumidza sezvazvinogona.
Mumwe mutengi weJapan ati: Makenduru akanaka emakisi emhando yepamusoro. Zvakanyatso kurongedzwa uye kuendeswa nenguva. Sevhisi yaikurumidza uye ine hushamwari. Unogona kuraira zvakare.
Heano mamwe emifananidzo nemutengi wedu kuti utaure.
Post nguva: Nov-19-2020